dayniile » GAL-MUDUG HALAGA BADBAADIYO HOGAAMIYE-KOOXEEDKA LAGU KHALDAMAY!
GAL-MUDUG HALAGA BADBAADIYO HOGAAMIYE-KOOXEEDKA LAGU KHALDAMAY!
AFLAGAADEYNTII BEESHA MURUSADE/HERIDIID
Xaaf ileen waa nin ku caan ah afgorocnimo iyo garasho liidatee, wuxuu af labadeed yeeray kulana kacay caay iyo aflagaado, mid ka mid ah beelihii walaalaha ahaa, ee deegaanka GM, kana mid ah beelihii kumidoobay dhismaha maamulka, waa: beesha Murusade/Heridiid/Sadex-iyo-Sagaal hadba sidaad utaqaano’e. Wuxuu nasiibdarro! Saxaafada kahoryiri: “Dad aan talin jirin baataliyey [Beesha Murusade], waxaana tagay dadkii talinjiray [Beesha Majeerteen]. Xaaf markuu sidaa uhadlayo, wuxuu iskagadayaa Cabdiweli Gaas, oo taageero beenaad umuujiyey, waxeeyna indhahiisa qabteen ookaliya RW Xasan Cali Kheeyre, oo uu ku eedeeynayey in uu qeyb kayahay, siyaasada isaga loogasoohorjeedo. Nasiibdarose! Wuxuu garanwaayey in mudane Xasan Cali Kheeyre yahay shaqsi, iyo siyaasi eey isqabankaraan, balse Murusadoo dhan aanu aheyn Xasan Cali Kheyre.Wuxuu sidoo kale garankariwaayey in beeshu kamidtahay beelihii waxkadhistay maamulka, kana mid ah dadka iyo deegaanka uu Xaaf sheeganayo in uu metelo. Waxaa taakasiidaran isagiina/Xaaf illaa iyo maanta wax raaligalin ah, kama bixin qadafkaa iyo meel uga dhacaa beeshaa sheekha iyo shaabkaba leh.
Odayaashii shalay qaab-beeleedka ugu hiilinayeyna, hadana waxeey mar labaad garanwaayeen in eey dhahaan, war waxaas waa khalad, dadkuna waa wada dhashaye, kanoqoo raaligalin kabixi. Nasiibdarose! Nin waalan, tol qabtana waayey, wax kaxuni majiraan.
Xaaf runtii mageeyo Gal-Mudug, mana aha ninkii mudnaa in uu hogaamiyo, maxaa yeelay malaha garashadii, hadal-aqoonnimadii iyo kartidii uu ummadaa isugu wadilahaa, horumarka eey ubaahanyihiina gaarsiinlahaa. In uu siiburburiyo maamulka, ummadaa walaalaha ah ee wada dagan, isdhalayoo isladhashay, dad iyo deegaanka wadaaga, maamulkaana kumidoobayna in uu kaladilo maahane, habayaraatee waxrajo ah lagama qabo, in uu isusoojiido, isusoodhaweeyo, oo midnimo iyo walaaltinimo kuhogaamiyo. Waxaa waajib ah, oo dhamaan odayaal-dhaqameedka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, culumaa’udiinka, dhalinyarada, haweenka ee dhamaan beelaha kumidoobay maamulka Gal-Mudug ku haboon in ay isdhaafiyaan Xaaf, markalana aan lacag lagudooran shaqsi aan uqalmin, in uu hogaamiye unoqdo reer Gal-Mudug si maamulkaa ubadbaado, horumar iyo xasilooni dhankasta ahna uu uhelo. Wabillaahi Toowfiiq.